Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe nrite K-Pop nke mbụ Indonesia Ugbu a na-egwugharị ndụ
Tokopedia, ụlọ ọrụ teknụzụ nwere ebe a na-ere ahịa na Indonesia, kwuputara South Korea 10 megastar otu zuru ụwa ọnụ na nkwanye ugwu mbụ ya n'ụwa niile WIB: Indonesia K-Pop Awards na 25 Nọvemba 2021.
Otu iri a bụ BTS na BLACKPINK, abụọ n'ime ndị nnọchi anya akara Tokopedia, yana kwa TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, na Aespa.
WIB: Indonesia K-Pop Awards bụ mmemme inye onyinye sitere n'aka obodo Indonesia maka otu megastar zuru ụwa ọnụ nke akpọtụrụla nke ndị na-akwado ha votu site na Tokopedia. Ihe nrite WIB Indonesia K-pop 2021 ga-abụ ihe ngosi ihe nrite izizi nye ndị na-akwado K-pop na Indonesia, ma ga-ewetakwa mmemme pụrụiche dị iche iche sitere na otu.
Obodo gburugburu ụwa nwere ike ịkwanye WIB: Indonesia K-Pop Awards na 25 Nọvemba site na 19.00 ruo 21.00 Jakarta Time (UTC+7) site na Tokopedia Play n'ime ngwa Tokopedia na ọwa Youtube gọọmentị Tokopedia. Ndị Fans nwere ike ile ihe nkiri a site na njikọ na-esonụ ma na-agba ha ume ka ha debe ihe ncheta ka ị ghara ịgbaghara na mbụ.
Ntinye aka dị iche iche South Korea otu megastar zuru ụwa ọnụ na mkpọsa Tokopedia gara aga Indonesia (Waktu Indonesia Belanja ma ọ bụ WIB) toro nke ukwuu, na-ebute mkparịta ụka mgbasa ozi ọha na eze ọbụna na-aga n'ihu na isiokwu na-ewu ewu n'ụwa nile.
A na-eme mkpọsa WIB nke Tokopedia kwa ụbọchị iri abụọ na ise ruo na ngwụcha ọnwa ọ bụla. Ndị Indonesia nwere ike ịchọta ngwaahịa dị iche iche nwere onyinye dị iche iche mara mma iji mee ka ịzụ ahịa dịkwuo mma.